Kismaayo News » Xuutiyiinta oo ku hanjabay inay Hargaysa duqaynayaan
Xuutiyiinta oo ku hanjabay inay Hargaysa duqaynayaan
Kn: Xoogagga Xuutiyiinta ee gacanta ku haya dalka Yemen ayaa ku hanjabay inay magaalada Hargaysa gantaalo ku garaaci doonaan hadii aysan Somaliland ka laaban saldhigga ay siiyeen xulufada Imaaraadka ee weerarka ku haya Xuutiyiinta.
Dhanbaal ay Xuutiyiintu ka akhriyeen muuqbaahiyaha ayay ku sheegeen in Soomaalida iyo Yemaniyiintu yihiin dad walaalo ah oo daris wanaag ka dhexeeyo, Soomaalidana looga baahanyahay inay arintaasi xushmeeyaan. Waxay ka digeen khatarta ka dhalan karta saldhigga ay Somaliland u sixiixday xulufada Imaaraadka, ayagoo wacad ku maray hadii xulufada Imaaraadku ay kaga soo duulaan Somaliland inay markaasi gantaalo ku garaaci doonaan caasimadda Hargaysa iyo waliba magaalooyin kale oo muhiim ah.
Hanjabaadan ka soo baxday Xuutiyiinta ayaa ah tii ugu cuslayd ee ka soo yeerta tan iyo intii ay soo ifbaxday in Somaliland ay saldhig ciidan siisay Imaaraadka iyo xulufadiisa, waxayna ku soo aadaysaa dhawr maalmood kadib markii Xuutiyiintu ay gantaalada riddada dhexe oo halis ah ay ku garaaceen Sucuudiga.
Sucuudiga ayaa Iiraan ku eedeesay inay gantaalada casriga siisay Xuutiyiinta, laakiin dhanka Soomaalida waxay u tahay waysha gowrac dibigu haku quusqaatee. Yemen iyo Soomaaliya ayaa sidaasi masaafo ahaan u kala fogayn, hadii ay Xuutiyiintu kaga dhabeeyaan hanjabaadana waxay sahayan kartaa mood iyo nool badan oo maanta dihin, si aysan taasi u dhicinna waxaa loo baahanyahay inuu caqligu shaqeeyo maadaama Soomaalidu horay u tiri “nimaan kuu furi doonin yuusan kuu rarin”.